ရောင်စုံပန်းကုံး, ဘောလုံး, မိုးစ, tinsel, မိုးရွာရွာ - ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုအစားထိုးလို့မရတဲ့အလှဆင်ခရစ်စမတ်သစ်ပင်များ - သစ်ကိုယခုနှစ်၏အဓိကအလှအပ။ နှင့်နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျနော်တို့အထူးလမ်းအတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ကိုအလှဆင်ချင်ပေမယ့်ကမရှိမဖြစ်ပစ္စည်းကုန်ကျစရိတ်ကိုထုတ်သယ်မထားဘူး။ ဒါပေမယ့်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ပေါ်ကစားစရာ, သငျသညျကိုသာ store မှာမဝယ်နိုင်ပေမယ့်လည်းသူတို့ရဲ့ကိုယ်လက်စေရန်။ ဤရွေ့ကား,, ငါ့ကိုယုံကြည်လုံးဝရိုးရှင်းပြီးရေတိုလုပ်ပါ။
မိမိတို့လက်နှင့်အတူဝမ်းနည်းဖန်ဆင်းတဲ့ပင်ဂွင်း - ဤသခင်သည်အတန်းထဲတွင်ကျနော်တို့ကခရစ်စမတ်ကစားစရာချုပ်ဖို့ဘယ်လိုလေ့လာသင်ယူရပါလိမ့်မယ်။
အနီနှင့်အဖြူ, ပန်းရောင်, ဖျော့ပန်းရောင်ခံစားခဲ့ရ;
sequins 1 အလွှာနဲ့ 1 ပတ်ပတ်လည်;
ငါခံစားရတယ်ပင်ဂွင်းတစ်ပုံစံဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်တစ်ဦးမာစတာအတန်းအစားကိုစတင်ပါလိမ့်မယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, တစ်ဦးခဲတံယူပြီးအနာဂတ်အတွက်ခရစ္စမတ်အလှဆင်, အမည်ရသည့်ကိုယ်ထည်, ဝမ်းဗိုက်, ခြေထောက်, ခြေ, နှာခေါင်း၏စာရွက်တစ်ရွက်ပေါ်ဆွဲပါ။
, 1 အပိုင်းအစ -2အပိုင်းပိုင်း, (အဖြူဝမ်းနည်းထံမှ) ဝမ်းဗိုက် - - 1 အပိုင်းအစ, ခြေခြေထောက် (ပန်းရောင်ဝမ်းနည်း) (အပန်းရောင်ဝမ်းနည်း၏) ခန္ဓာကိုယ်: အခုသင်ဝမ်းနည်းအပေါ်စာရွက်တစ်ရွက်ကနေပုံစံကိုလွှဲပြောင်းပြီးအောက်ပါပမာဏသာရှိအစိတ်အပိုင်းများကိုကစားစရာဖြတ်ချင် နှာခေါင်း (အနီရောင်ခံစားခဲ့ရ) - 1 အပိုင်းအစ။
တဦးတည်းချည်ဖြူချည်ကြားရှင်းကြိုး obmetochnym ချုပ်ရိုးတစ် paunch နှင့်အတူတစ်ဦးကိုယ်ထည်ပင်ဂွင်းချုပ်။ ကောင်းစွာရယူပါ။
သူ့မျက်စိဖွဲ့စည်း, ပင်ဂွင်း muzzle မှအနက်ရောင်ပုတီးချုပ်။
နှုတျသီးပင်ဂွင်းအပိုင်းအစမျိုးတွင်ချုပ်ရန်တဦးတည်းချည်ထဲမှာအနီရောင်ချည်ကြားရှင်းကြိုး obmetochnym ချုပ်ရိုး။
paillettes မိုးစကို ယူ. ခြေထောက်ပင်ဂွင်းအကြားကချုပ်အောက်ပါအတိုင်း: တစ်ချည်မိုးစပုတီးအပေါ်တင်ထို့နောက်အပေါက်ကိုပင်ဂွင်းမိုးစနေတဆင့်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့မှားယွင်းတဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဖို့အပ်ပြန်သွားပါ။
ကျွန်တော်ယခု မှစ. ခရစ္စမတ်သစ်ပင်ပေါ်တွင်အရုပ်ဆွဲထားဖို့တံ့သောအားဖြင့်ကွင်းဆက်ဖွဲ့စည်းသတ္တုကြိုး၏။ ကြိုးအမြီးနှစ်ခုက်ဘ်ဆိုက်များမှခညျြနှောငျ။
Next ကိုချည်နှစ်ဦးစလုံးကိုယ်ထည်ပင်ဂွင်း၏နှစ်ခု strands ချုပ်ဖို့အဖြူရောင် obmetochnym ချုပ်ရိုး threads ။ သတ္တုများ၏သင်တန်းတစ်ခု eyelet ကြိုးချုပ်။ အခါကစားစရာ doshita တက်အလယ်မှာကျနော်တို့ဒြပ် padding ကိုအတူကဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်တဆင့် doshivaem ။
ဖြူဖပ်ဖြူရောပန်းရောင်သေးငယ်တဲ့စတုဂံဖြတ်ခံစားရတယ်။ ယင်းပြင်ဆင်ချက်ထုံး၏မှားယွင်းတဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအနေဖြင့်တစ်ဦးစတုဂံချုပ် basting ချုပ်ရိုး၏အလယ်။ အဆိုပါရလဒ်လေးကိုဖြစ်ခဲ့သည်။ တချည်သို့အနီရောင်ချည်ချည်ထဲမှာချုပ် basting လေးကိုအိမ်မှပုံနှင့်မိုးစသည့်ပင်ဂွင်းမှချုပ်သောတူညီသောလမ်းအတွက်ပုတီးနှင့်အတူလှည့်လည် sequins ၏အလယ်တွင်အလှဆင်။
ဒါဟာကောင်းတဲ့နည်းနည်းပင်ဂွင်းကိုသင်၌မွေ့လျော်မည်ခရစ္စမတ်သစ်ပင်တွန်းလှန်အလှဆင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်။ ဤရွေ့ကားပင်ဂွင်းငှက်များကိုကွဲပြားခြားနားသောအရောင်များ၏ဝမ်းနည်းကြေထံမှချုပ်ခံရနိုင်ပြီး, အသီးအသီးအထူးသဖြင့်ကြည့်ရှုပါလိမ့်မယ်။
ရေးသားသူ - Zolotova Inna ။
Kinusayga - မာစတာအတန်းအစား
မိမိတို့လက်နှင့်အတူ LICs ချုပ်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ?
Britney Spears ကယ့်ကိုပါးလွှာ: retouching ဂရမ်မရှိဘဲကမ်းခြေဓာတ်ပုံများကို
ကျနော်တို့အိမ်ထောင်ရေးစာချုပ် Harvey Weinstein နှင့်သူ၏ဇနီး, Georgina ချပ်မန်း၏အသေးစိတ်လေ့လာသင်ယူကြပါပြီ
Galangal အမြစ် - ဆေးဖက်ဝင်ဂုဏ်သတ္တိများ
ကြမ်းပြင်မှ Peach စားဆင်ယင်
Sucralose - အန္တရာယ်သို့မဟုတ်အကျိုးခံစားခွင့်?